ओलीको प्रस्तावमा भुसालकाे फरक मत – nepaljagaran.com
नेपाल जागरण । ११ आश्विन २०७८, सोमबार मा प्रकाशित
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठक तीनवटा प्रतिवेदन पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ।
शुक्रबार सुरु भएको सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेकोे विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै आइतवार सम्पन्न भएको हो।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावप्रति उपमहासचिव घनश्याम भुसालले फरक मत राखेका छन्। उनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ माथि प्रश्न उठाउँदै तीन बूँदे फरक मत राखेका हुन्।
भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद परिभाषित नगरीकन अघि बढनै नसकिने तर्क गरेका छन्। फरक मत राखेका भुसाल भन्छन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद के हो? भन्ने कुरा परिभाषित गरेको छैनौं। त्यसलाई सिद्धान्तको रुपमा परिभाषित गरेका छैनौं, अफिसियल्ली आधिकारिक रुपले। हामी यसरी लामो समयसम्म जान सक्दैनौं। जनताको बहुदलीय जनवादको यत्रो कुरा गरेका छौं। तर त्यो के होे? भन्ने कुरा नै नभनेर पनि जान सकिन्छ? तसर्थ यो पनि हामीले परिपूर्ण गराऔं भन्ने मेरो कुरा हो।’
उपमहासचिव भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद ‘आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेजस्तो’ हुन नहुने टिप्पणी समेत गरेका छन्। ‘हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरेका छौं। त्यो चाहिँ हामी जस्ले जे भन्छ, त्यो आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेजस्तो जसले जे बुझ्यो, त्यही भयो। त्यसलाई परिभाषित गरेका छैनौं। जनताको बहुदलीय जनवादले के गर्छ? साम्राज्यवादको विरोध गर्छ। जनताको समर्थन गर्छ, जनताको पक्ष लिन्छ। महिलाको पक्ष लिन्छ। युवाको पक्ष लिन्छ, यस्ता अनेकन कुरा भन्न सकिन्छ। तर, स्वयम् जनताको बहुदलीय जनवाद के हो? भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेका छैनौं’, भुसालले फरक मत राख्नुपर्नाको कारण बताए।
उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनले ठूलो धक्का खानुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कमजोरीबारे अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश नभएपछि फरक मत राख्नुपरेको बताए। समाजवादमा जाने ठोस कार्यक्रम पनि अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको भुसालको भनाइ छ।
‘दस्तावेजहरूमा धेरै आवश्यक र उचित कुराहरु पनि छन । तर त्यसमा नपुगेका केही आधारभूत कुराहरु पनि छन् भन्ने मेरो भनाई हो। मैले स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रिय कमिटी बैठकमा पनि मलाई लागेको कुरा राखेको छु। जसमा अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ। त्यो धक्का सानोतिनो छैन’, भुसालको भनाइ छ। उनले पार्टी विभाजनबारे जिम्मेवार वस्तुगत रुपले मूल्यांकन नभएकोले कमी कमजोरीबारे समिक्षा हुन जरुरी रहेको औल्याएका छन्।